दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेस गर्ने ४९ डाक्टरलाई एमडी–एमएस पढ्न रोक « Naya Page
दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेस गर्ने ४९ डाक्टरलाई एमडी–एमएस पढ्न रोक
काठमाडौं, २१ फागुन । सुगममा बसेर दुर्गममा काम गरेको झुटो विवरण पेस गर्ने ४९ डाक्टरले विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी–एमएस) अध्ययन गर्ने मौका गुमाएका छन् । कतिपयको सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको अवसर समेत गुमेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत १८, १९ र २० पुसमा एमडी–एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा गरेको थियो । नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि कतिपय डाक्टरले बढी अंक प्राप्त गर्ने लोभमा झुटो विवरण भरेको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ ले निजामती सेवा ऐनअनुसार दुर्गम क्षेत्र कायम गरेको छ । दुर्गममा काम गरेबापत बढीमा १० अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ‘क’ वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको विद्यार्थीले प्रतिवर्ष दुई अंक र ‘ख’ मा काम गरेकाले प्रतिवर्ष १.५ अंक प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, कार्य अनुभवको प्रतिवर्ष एक अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । झुटो विवरण भर्नेलाई दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउनेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने भए पनि अहिले न्यूनतम कारबाही गरेको हो । हामीले ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरेका छौँ ।
डाक्टरहरूले भरेको विवरणअनुसार सफ्टवेयरबाटै अंक निकालेर नतिजा निकाल्ने व्यवस्था छ । ‘डाक्टरहरूले गलत विवरण भरे भन्ने कल्पना गर्ने कुरा भएन, रिजल्ट आएपछि उजुरी प¥यो र छानबिन गर्दा गलत भेटियो,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने, ‘डाक्टरहरूले नजानेर त्रुटि गरेको भए ‘क’ वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेर ‘ख’ वर्गको विवरण पनि भरेको हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन ।’ केहीले दुई वर्ष कालिकोटमा काम गरेर पोखरामा सरुवा भए पनि चार वर्ष कालिकोटमै काम गरेको विवरण भरेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार एमडी–एमएसको प्रवेश परीक्षासँग सम्बन्धित डेढ दर्जन रिट परेका छन् । सर्वोच्चले योग्यताक्रमबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले गत सोमबार सबै रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो, तर पछि स्थगित भयो ।
‘हतारमा फारम भर्दा सामान्य त्रुटि भयो, तर मैले सेवाको विवरणसहितका सबै डकुमेन्ट अपलोड गरेको थिएँ । सबै प्रमाण डकुमेन्टले नै बोल्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अपलोड भएका डकुमेन्ट रुजु गर्नुपथ्र्यो, तर नगरीकनै कारबाही ग¥यो,’ डा. पोखरेलले भने, ‘मबाट पनि सामान्य त्रुटि भयो, नियत नै खराब थिएन । तर, आयोगले आफ्नो कमजोरी लुकाउन हामीलाई कारबाही ग¥यो । अब हामी न्यायको पक्षमा पर्खाइमा छौँ ।’
योग्यताक्रमबाट हटाइएका डा. भीष्मप्रसाद पोखरेल भन्छन् – हाम्रो सामान्य त्रुटि भयो, तर आयोगले आफ्नो गल्ती लुकाउन कारबाही गर्‍यो
मैले ०७३ मा कालिकोटमा करारमा काम सुरु गरेको हो । अहिले स्थायी हुँ र कालिकोटमै कार्यरत छु । बीचको अवधि काठमाडौंलगायत केही अन्य ठाउँमा पनि काम गरेँ । आयोगले पहिलोपटक अनलाइनबाट पिजीका लागि फारम खुलाएको थियो, हतारमा भर्दा ०७३ देखि हालसम्म कालिकोटमा कार्यरत भयो, सामान्य त्रुटि भयो । मैले सेवाको विवरणसहितका सबै डकुमेन्ट अपलोड गरेको थिएँ ।
सबै प्रमाण डकुमेन्टले नै बोल्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अपलोड भएको डकुमेन्ट रुजु गर्नुपर्थ्यो, तर गरेन । अनलाइन फारम भरेर, परीक्षा दिएर रिजल्ट आयो । रिजल्ट आएपछि मैले रिटोटलिङ पनि गरेँ । त्यसमा पनि यथावत् आयो र भर्नासमेत भएको थिएँ । मबाट पनि सामान्य त्रुटि भयो, नियत नै खराब थिएन । तर, आयोगले आफ्नो कमजोरी लुकाउन हामीलाई कारबाही ग¥यो । अब हामी न्यायको पक्षमा पर्खाइमा छौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट